Garow - Gpedia, Your Encyclopedia
Kani waa maqaal ku saabsan garowga. Boga "Hadhuudh" halka ayaa laga soo toosiyay.
Qoyska hoose: Panicoideae
Moench 1794, magaco loo yaqqanay Sorgum Adanson 1763
Blumenbachia Koeler 1802, magaca diday ma ahayn Schrad. 1825 (Loasaceae)
Garow (Af Ingiriis : Sorghum; Af carabi: سورغم) (sidoo kale loo yaqaano Hadhuudh) waa xubin ka mid ah dhirta cowsleyda ah ee dhasha midhaha firileyda ah, taasi oo ka baxda meelo badan oo dunid ah. Geedka garowgu wuxuu aad uga baxaa qaarada Ustareliya, qeeybo ka mid ah qaarada Afrika, wadano ka mid ah qaarada Aasiya, Ameerika iyo gasiirado ka tirsan Badweynta Hindiya iyo Badweynta Baasifik.
Geedka hadhuudhka wuxuu ka baxaa caro nafaqo fiican leh, wuxuuna u baahan yahay biyo dhowr bilood ah, iyo qorax badan; taasi waa sababta wadanka Soomaaliya looga beero garowga wakhtiga gu'ga ah oo kali ah. Hal nooc oo ka mid ah garowga ayaa loo beertaa midho ahaan; halka dhamaan noocyada kale ee geedaha gorowga u baxaan si dabiici ah, sii loo daaqsiiyo xoolaha. Midhaha geedaha garowga aan helin cimilo diiran oo ku filan waxay noqdaan kuwo madoow oo yaryar; halka kan ku baxa ileyska qoraxda iyo biyaha roobku noqdo kan ugu midho badan ee fiican.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Garow&oldid=147943"